पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै वीर अस्पतालमा धर्ना
२०७५ फाल्गुण १ बुधबार, काठमाडौं । १९० दिन देखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा पदाधिकारी नियुक्त नभएपछि आधिकारीक कर्मचारी युनियनले आन्दोलन सुरु गरेको छ । कर्मचारी युनियनले फागुन १ गते बुधबारदेखि अस्पताल प्रागणमा धर्ना सुरु गरेको छ । ... बाँकी अंश»
दाङमा डरलाग्दो कुपोषण
२०७५ फाल्गुण १ बुधबार, नारायणपुर । मनखुशी सुनारलाई २७ वर्षकै उमेरमा पाँच छोराछोरीको पालनपोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवार आइपर्‍यो । दुई सन्तानकी आमा मनखुशीलाई दिदीका तीन बच्चाबच्चीको पनि पालनपोषण गर्नुपरेपछि घर चलाउनै धौ धौ छ । ... बाँकी अंश»
नेपालीले मनपराउने यी खानेकुरामा क्यान्सरको संभावना ज्यादा
२०७५ माघ २९ मंगलबार, काठमाडौं । क्यान्सर प्रणघातक रोग मानिन्छ । यो रोग विभिन्न कारणले लाग्छ । जसमध्ये केही मात्रामा मानिसहरुको खानेकुरा पनि एक कारण हो । त्यसैले क्यान्सरबाट बच्न खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ क्यान्सरको जोखिम भएका केही खानेकुराहरु उल्लेख गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
एकैपटक आठको डायलासिस
२०७५ माघ २९ मंगलबार, लमही । यसअघि छ जनाको डायलासिस गर्दै आएको दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले अब आठको डायलासिस गराउने भएको छ । ... बाँकी अंश»
धनुषामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु
२०७५ माघ २९ मंगलबार, जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ । उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य बीमा सदस्यता वितरण गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन । ... बाँकी अंश»
महिनावारी रोकिएको चार वर्षपछि टेष्ट ट्युवबाट ५४ वर्षेले जन्माइन् नेपालमै जुम्ल्याहा बच्चा
२०७५ माघ २९ मंगलबार, काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक ५४ वर्षको उमेरमा एक महिलाले टेष्टट्युब बेवी प्रविधिबाट जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छन् । अचम्म त के भने उनको ५० वर्षको उमेरमा महिनावारी रोकिएको थियो । ... बाँकी अंश»
दाताको भरमा आन्द्रा र रक्त क्यान्सरका बिरामी
२०७५ माघ २८ सोमबार, चितवन । एउटा सामाजिक संस्थाले देशका ६३१ जना बिरामीको जीवन बचाइरहेको छ । धेरैलाई त्रास दिलाउने क्यान्सर रोगबाट ग्रसित बिरामीलाई निकै महङ्गो औषधि निःशुल्क दिएर ‘म्याक्स फाउण्डेसन’ नामक बिदेशी संस्थाले उनीहरुको जीवन बचाइरहेको हो । ... बाँकी अंश»
यी घरेलु उपायले नबस्न सक्छ पेटमा शिशु
२०७५ माघ २८ सोमबार, काठमाडौं । परिवार नियोजन विवाहित जोडिको लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । गर्भधारणले वास्तविक खुशी तब प्रदान गर्दछ जब त्यो सहि समयमा प्लानिङ्ग गरिन्छ । यदि महिला चाडैं गर्भवती भए त्यो एक झन्झटको बिषय बन्न जान्छ । साथै पछिल्लो समय महिला - पुरुष परिवार नियोजनका अस्थाई साधनहरु प्रयोग गर्न झन्झट मान्ने गरेका छन् । यदि तपाई पनि गर्भवती चाडै नहोस् र अस्थाई साधन प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय । ... बाँकी अंश»
उपचारको नाममा अस्पतालले सम्पत्ति सक्यो, भयो मन्दिरको बास
२०७५ माघ २६ शनिबार, पर्वत । क्यान्सरबाट पीडित पदमबहादुर कँडेल उपचार गर्दागर्दै घरखेत लिलाम भएपछि मन्दिरमा बस्न थालेका छन् । ... बाँकी अंश»
कम्प्युटरजस्तो तेज दिमाग भएको सन्तान चाहनुहुन्छ ? यस्ता खानेकुरा खानुहोस्
२०७५ माघ २५ शुक्रबार, काठमाडौं । गर्भावस्थामा नै बच्चाको दिमागी विकास शुरु हुन्छ । यस्तोमा शिशु कत्तिको बुद्धिमान् हुन्छ भन्ने कुरा आमाको खानेकुरामा धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ । यस्तोमा तेज दिमाग भएको बच्चाको लागि गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी कुराहरु समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ – ... बाँकी अंश»
यी कारण रोकिँदैन बच्चा पेटमा हुँदा पनि रक्तस्राव
२०७५ माघ २५ शुक्रबार, काठमाडौं । सामान्यत महिला गर्भवती भएपछि महिनावारी रोकिन्छ । महिनावारी नहुनु गर्भावस्थाको सूचक हो । तर कुनै गर्भवती महिलालाई रक्तस्राव हुन थाल्छ भने हामीमा डरको स्थिति सर्जना हुन्छ । केहि मामिलामा गर्भावस्थाको क्रममा पनि महिनावारी हुन सक्छ । यसले गर्भमा रहेको शिशिलाई कुनै खतरा हुदैन । ... बाँकी अंश»
ब्यूटी पार्लर नगइ यी कुरा अपनाए घरमै बन्न सकिन्छ सुन्दरी
२०७५ माघ २४ बिहिबार, काठमाडौं । तपाईँ आफू आफैंमा सुन्दर देखिन त पक्कै पनि चाहनुहुन्छ होला । तपाईँलाई आफ्नो सुन्दरताको विषयमा लाग्ने गरेको चिन्ताको कारणले तपाईँको दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत असर पुगेको अनुभव पनि गरिरहनु भएको होला । ... बाँकी अंश»
ई– सिग्रेट पिउँदा विष्फोट, उपचारका क्रममा ब्राउनको मृत्यु
२०७५ माघ २४ बिहिबार, काठमाडौं । वास्तविक धूमपानभन्दा केही कम असर गर्ने भएकाले युवापुस्तामा ई–सिग्रेटको प्रयोग बढ्दो मात्रामा छ । यद्यपि ई–सिग्रेट प्रयोगको क्रममा ध्यान नदिए तत्कालै ज्यान पनि जान सक्ने एक घटनाले देखाएको छ । ... बाँकी अंश»
बर्षेनी २६ हजार नयाँ क्यान्सर रोगी पहिचान, महिला बढी
२०७५ माघ २१ सोमबार, काठमाडौं। आज विश्व क्यान्सर दिवस ‘म सक्छु, म गर्छु’ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाईंदैछ। क्यान्सर रोगविरुद्ध सचेतना जगाउन हरेक वर्ष फेब्रुअरी ४ मा विश्वभर ‘विश्व क्यान्सर दिवस’ मनाउने गरिएको छ। क्यान्सर रोगको उपचार र रोकथाममा सक्रिय बिभिन्न अस्पताल तथा संघसंस्थाले विश्व क्यान्सर दिवस क्यान्सरसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ मनाउने गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा शुरु
२०७५ माघ २० आइतबार, अत्तरिया । कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकास्थित चौमाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा शुरु गरिएको छ । नगरवासीको मागलाई सम्बोधन गर्दै सर्वसाधारणले स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले सो आकस्मिक सेवा विस्तार गरिएको हो । ... बाँकी अंश»
बिमारी कुरुवा लुटिए
२०७५ माघ १७ बिहिबार, धरान ।सुनसरीको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको केटिएम सेक्युरिटी प्रालिको लापर्वाहीले बिमारीका कुरुवा लुटिएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ माघ १७ बिहिबार, अमरगढी ।डडेल्धुरामा उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना भएको चार वर्ष भयो। चार वर्षमा पनि दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन् । उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरामा १९ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छतर हालसम्म एकजना पनि विशेषज्ञ डाक्टर छैनन्। ... बाँकी अंश»
अण्डा यसरी खाए घट्छ तौल
२०७५ माघ १६ बुधबार, काठमाडौं । तौल कम गर्नको लागि प्रोटीन महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ। प्रोटीनले तपाईंको शरीरको मेटाबालिजमलाई सही राख्छ। साथै तपाईंको भोकलाई पनि कम गर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यसले फ्याट घटाउँछ। ... बाँकी अंश»
धनकुटामा आँखा उपचार अझ सुधारिदै
२०७५ माघ १५ मंगलबार, धनकुटा । नेपाल नेत्र ज्योती संघ धनकुटाले संचालन गरेको डा. राम प्रसाद पोखरेल आँखा अस्पताल धनकुटालबाट संचालन भैरहेको आँखा उपचार सेवालाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नका लागी साधन स्रोत सम्पन्न बनाउदै लाने मंगलबार निर्णय गरेको छ । ... बाँकी अंश»
जाजरकोटका बढ्यो अस्थायी साधनको प्रयोग
२०७५ माघ १३ आइतबार, जाजरकोट ।दुई वर्षअघि कण्डमको नाम सुन्ने बित्तिकै मुख छोपेर भाग्ने जाजरकोटका ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा पुरुषमा अहिले प्रयोग दर बढेको छ । महिला स्वयंसेविका र स्वास्थ्य संस्थाको निरन्तर जागरणका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा अस्थायी साधन प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो । ... बाँकी अंश»